अवसरको अधिकतम बनाउनुहोस्, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
हरेक अवसरको अधिकतम बनाउनुहोस्
के तपाईं आफ्नो समय बढाउन चाहानुहुन्न? वा, अझ राम्रो, दोस्रो मलाकीको अझ राम्रो प्रयोग गर्न समय फिर्ता गर्नुहोस्? तर हामी सबैलाई थाहा छ कि समय त्यो तरिकाले काम गर्दैन। हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौं वा खेर फालिरहन्छ यसले केही फरक पार्दैन। हामी न व्यर्थ समय फिर्ता किन्न सक्छौं न व्यर्थको समयलाई पुनःप्राप्त गर्न सक्छौं। हुनसक्छ त्यसैले प्रेरित पावलले मसीहीहरूलाई यस्तो सल्लाह दिए: त्यसोभए, तपाईं कसरी आफ्नो जीवन बुद्धिमानीको रूपमा होइन तर बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको रूपमा हेर्नुहुन्छ र समय किन्नुहोस् [a। Ü।: हरेक अवसरको उत्तम बनाउँछ]; किनभने यो नराम्रो समय हो। त्यसकारण बुझ्न नहुनु, तर प्रभुको इच्छा के हो बुझ्नुहोस् (एफि। १: २०-२१)
एफिससका मसीहीहरूले प्रत्येक क्षणको फाइदा उठाएर परमेश्वरको इच्छाबमोजिम आफ्नो समयको प्रयोग गरेको पावल चाहन्थे। एफिसस जस्तो ठूलो शहरमा त्यहाँ धेरै अलमल्याउने कुराहरू थिए। एफिसस एशियाको रोमी प्रान्तको राजधानी थियो। यो पुरातात्वका सात आश्चर्य मध्ये एकको घर थियो - आर्टेमिसको मन्दिर। जस्तो आज हाम्रो आधुनिक महानगरहरूमा जस्तै यो शहरमा धेरै भइरहेको थियो। तर पावलले इसाईहरूलाई सम्झना गराए कि उनीहरूलाई यस ईश्वरहीन शहरमा ख्रीष्टको हात र हतियार भनिन्छ।
हामी सबैसँग प्रतिभा र स्रोतहरू छन्, हामी सबैसँग दिनको २ 24 घण्टा छ। तर हामी हाम्रा प्रभु र मास्टर येशू ख्रीष्टका सेवकहरू पनि छौं, र यसले हाम्रो समयलाई संसारमा अद्वितीय बनाउँछ। हाम्रो समय हाम्रो स्वार्थलाई सन्तुष्ट पार्नुको सट्टा परमेश्वरको महिमा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हामी हाम्रो काम गर्ने समयलाई हाम्रो रोजगारदाताहरूको लागि सक्दो गर्न प्रयोग गर्दछौं जस्तो कि हामी ख्रीष्टको लागि काम गरिरहेछौं (कल। 3,22.२२) सायद केवल तलब प्राप्त गर्नुको सट्टा वा, अझ खराब, तिनीहरूबाट चोरी। हामी हाम्रो खाली समय सम्बन्धहरू निर्माण र सुदृढीकरण गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं, र हाम्रो स्वास्थ्य र भावनात्मक जीवनलाई पुनर्जीवित गर्नको सट्टा तिनीहरूलाई अनैतिक, अवैध, वा विनाशकारी बानीहरूको लागि प्रयोग गर्नुको सट्टा। हामी आफैंले माथि धकेल्नुको सट्टा मानसिक शान्तिको लागि हाम्रो रातहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामी आफ्नो समयलाई अध्ययनको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं आफूलाई सुधार्नको लागि, खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न वा सहयोगी हात दिनको लागि सोफेमा बस्नुको सट्टा।
हो, हामीले हाम्रा सृष्टिकर्ता र उद्धारकको पूजा गर्न समय लिनुपर्दछ। हामी उसको कुरा सुन्छौं, हामी उसको प्रशंसा गर्छौं, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं र हाम्रो चिन्ता, चिन्ता, चिन्ता र शंका उहाँमा ल्याउँछौं। हामीले गुनासो गर्ने, अपमान गर्ने वा अरूको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै बिर्सनु हुँदैन। यसको साटो हामी तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं। हामी खराबीलाई राम्रोसँग बदला लिन सक्छौं, हाम्रा संकटहरू परमेश्वरमा सुम्पन सक्छौं र पेटको अल्सरबाट बच्न सक्छौं। हामी यस प्रकारले बाँच्न सक्दछौं किनकि ख्रिष्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ किनकि परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह ख्रीष्टमार्फत हामीमाथि डो directed्याउनुभयो। ख्रीष्टमा हामी हाम्रो दिनलाई केही मूल्यवान् बनाउन सक्छौं।
एफिससका मसीहीहरूलाई पत्र लेख्दा पावल झ्यालखानामा थिए र उनले मदत गर्न सकेन तर हरेक मिनेट बितेकोमा उनी सजग थिए। हो, किनकि ख्रीष्ट उहाँमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यसैले उनले आफ्नो कैदलाई हरेक अवसरको अधिकतम बनाउन अवरोध हुन दिएन। आफ्नो कैदलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै उनले मण्डलीहरूलाई पत्र लेखे र मसीहीहरूलाई परमेश्वरको इच्छाबमोजिम कसरी जीवन बिताउने भनेर सजग हुन चुनौती दिए।
हाम्रो समयमा आज प्रायः त्यस्तै अनैतिकता र भ्रष्टाचार छ जुन इसाईहरूले पावलको समयमा अनुभव गरेका थिए। तर चर्च, उसले हामीलाई सम्झाउँदछ, अन्धकारको संसारमा प्रकाशको एक चौकी हो। चर्च भनेको त्यस्तो समुदाय हो जहाँ सुसमाचारको शक्ति अनुभव हुन्छ र अरुसँग बाँडिन्छ। यसका सदस्यहरू पृथ्वीका नुनहरू हुन्, मुक्तिको लागि खोजिरहेको संसारमा यो आशाको निश्चित स .्केत हो।
त्यहाँ एक जना जवान मानिस थिए जसले आफ्नो संस्थामा काम गरे र अन्ततः पुरानो, सजिलै चिडाउन सक्ने राष्ट्रपति बदल्न नियुक्त भए। उनले पद ग्रहण गर्नु भन्दा केही दिन पहिले त्यो जवान मानिस पुरानो राष्ट्रपतिकहाँ गयो र उनलाई सल्लाह दिन सक्छु कि भनेर सोध्यो।
दुई शब्द, उनले भने। सही निर्णय! त्यस जवान मानिसले सोध्यो: तिमी कसरी भेट्छौ? वृद्धले भने: यो अनुभव लिन्छ। तपाईंले यो कसरी पाउनुभयो? युवकलाई सोध्यो? ती वृद्धले जवाफ दिए: गलत निर्णयहरू।
हाम्रा सबै गल्तीहरूले हामीलाई बुद्धिमती बनाउँदछन् किनकि हामी प्रभुमा भरोसा राख्छौं। हाम्रो जीवन झन् झन् ख्रीष्टको जस्तै बनोस्। हाम्रो समयले यस संसारमा उहाँको इच्छाबमोजिम गरेमा हामी परमेश्वरको महिमा गरौं।